အချိုရည် က ကိုယ်အလေးချိန်တက်စေသလား - Hello Sayarwon
” ငါကတော့ ရေသောက်တာတောင် ဝတယ်။ ဘာမှမစားလည်းဝ နေတာ ပဲ …… ပေါင်ချိန်တွေလည်း တက်လာတယ်” သူငယ်ချင်းပျိုမေတော်တော်များများညည်းညူကြတာတွေ ကြားဖူးနေပါရဲ့။ တကယ်လည်း weight လျှော့နေတာဆိုပြီး ထမင်းဟင်း ဟုတ်တိပတ်တိ မစားကြ။
” ဘာမှမစားဘဲတော့ ဘယ်ဝပါ့မတုန်းဟ။ တစ်ခုခု မှားနေလို့ နေမှာပါ” လို့ ဖြေသိမ့်ရင်း သေချာမေးကြည့်တော့ သူတို့က အချိုရည်သိပ်သောက်တယ်။ ထမင်းမစားဖြစ်ဘူး … နည်းနည်းဆာချင်ပြီဆိုရင် အချိုရည် တစ်ဘူးလောက်ဝယ်သောက်လိုက်တာပဲ တဲ့ ။ တစ်ခါတလေ သိပ်ဆာရင် တစ်ဘူးတောင် မကဘူး ဆိုပဲ။
“ ဟယ်…. အဲတော့ ဘာထူးမှာလဲ…. ပိုတောင်ဆိုးဦးမယ် “ ဆိုတော့မှ မျက်လုံးလေး ကလယ်ကလယ်နှင့် …။
အချိုရည်လို့ ဆိုတဲ့နေရာမှာ သဘာဝက ရတဲ့ အသီးအနှံတွေကို ကြိတ် ဖျော်ပြီးရလာတဲ့ ဖျော်ရည်တွေကို ပြောချင်တာ မဟုတ်ဘဲ စျေးကွက်ထဲမှာ ဘူးကြီးဘူးငယ်ပုံစံ မျိုးစံနဲ့ ရောင်းချပြီး အသင့်သောက်သုံးနိုင်တဲ့ အချိုရည်တွေ ကို ရည်ညွှန်းချင်တာပါ။
ဒီ အချိုရည်တွေက ဘာလို့ ကိုယ်အလေးချိန်တက်စေသလဲ ကြည့်ရအောင်။ ဘယ်လောက်ပဲ သဘာဝ အသီးအနှံက ရတာပါလို့ ကြော်ငြာထားထား အချိုရည်ဘူးတွေ မှာ သဘာဝသကြားမဟုတ်ဘဲ ဓာတုဗေဒနည်းနဲ့ ပြုပြင်ထားတဲ့ high fructose sugar (ခေါ်) စူပါသကြား တွေပါဝင်ပါတယ်။ သကြားက လူကို ဝစေသလားမေးရင်… ဟုတ်ကဲ့၊ ဝစေပါတယ်။ ကျန်းမာရေး လိုက်စားသူတွေနဲ့ gym ဆော့ပြီး ကြွက်သားမွေးတဲ့သူတွေဟာ ရိုးရိုး သကြားကိုတောင် ရှောင်ကြပါတယ်။ ထမင်း ပန်ကန်လုံး တစ်လုံးစာမှာ ကယ်လိုရီ (200 ) kcal လောက် ပါတယ်ဆိုရင် အဲဒီလို 300 ml ပါ အချိုရည်တစ်ဘူးဟာ သကြားပါဝင်မှုအပေါ်လိုက်ပြီး အနိမ့်ဆုံး ကယ်လိုရီ ( 150 ) kcal ကနေ အမြင့်ဆုံး (300) kcal ပတ်ဝန်းကျင်ထိရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ ညစာရှောင်မယ်ဆိုပြီး အချိုရည်တစ်ဘူးဖောက်သောက်လိုက်တာက ဘာမှ သိပ်မထူးပါဘူး။
နောက်တစ်ချက်က သည် အချိုရည်တွေမှာ ဆား ( sodium ) ပါဝင်မှုမြင့်တဲ့ carbonated gas တွေ၊ soda တွေကို ကြာရှည်ခံစေဖို့နဲ့ အရသာထူးကဲစေဖို့ ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ထည့်သွင်း ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ အဲဒီ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေက osmosis (ခေါ်) ရေဆွဲမှုသဘောတရားအရ ခန္ဓာကိုယ် မှာ မလိုအပ်ဘဲ ရေတွေ စုပုံလာစေတယ်။ ဆိုတော့ ကြာရှည်မှာ လူက ပွပွ ဖောဖော ဖြစ်လာပြီး ဝ လာတော့တာပေါ့။
ကဲ…… ရေခဲစိမ်ထားတဲ့ အချိုရည်အေးအေးလေးတွေကလည်း သောက်လို့ သိပ်ကောင်းတယ် မဟုတ်လား။ မောလို့… ရေငတ်လို့….ကြိုက်လို့…အလွယ်တကူ အဆာပြေဖို့…ထမင်းမစားချင်လို့ စတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ သောက်နေကြတယ်လေ။ ကြော်ငြာတွေကလည်း သောက်ချင်စရာ ကောင်းအောင်ကြော်ငြာတာကိုး။ စစ်တမ်းတွေအရ သည်အချိုရည်တွေကို စွဲစွဲမြဲမြဲ သောက်သုံးနေသူတွေ ထဲက ၆၇% ကတော့ ဆီးချိုရောဂါဖြစ်နိုင်ချေ မြင့်တက်လာပြီး ၃၇% ကတော့ ဇီဝဖြစ်စဉ် ကမောက်ကမ ဖြစ်စေတဲ့ ရောဂါမျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်ချေမြင့်တက်လာတာ တွေ့ရပါသတဲ့။ ဒါတွေအပြင် ဆိုးဆေး နဲ့ တာရှည်ခံဆေး အန္တရာယ် ကလည်း မသေးဘူးလေ။ တကယ်တမ်း ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစားကျချင်ပြီ …ကိုယ်အလေးချိန်ချချင်ပြီဆိုရင် အချိုရည်တင်မကဘူး… ကဆီဓာတ် သကြားဓာတ်များတာတွေ ကို အကုန်ရှောင်ရတော့မှာပါ။
အစားမစား အငတ်ခံနေတာမျိုး မလုပ်ဘဲ အစားအသောက် ပုံစံကို စနစ်တကျဆွဲ ပြီး ရှောင်သင့်တာရှောင် စားသင့်တာစား လုပ်ရမှာပါ။ weight ထိန်းချင်သူတော်တော်များများက အဆီကို ကြောက်ကြတယ်။ တကယ်တမ်း သူတို့ကြောက်သင့်တာက သကြားဖြစ်ပြီး အဆီထဲမှာမှ သံလွင်ဆီလို ကျန်းမာရေး အထောက်ကူပြု မပြည့်ဝဆီ တချို့ဟာ ဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ် ရဲ့ မကောင်းတဲ့ cholesterol အဆီဓာတ်ကိုတောင် ကျစေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သတိယှဉ် ဆင်ခြင် စားသုံးနိုင်ကြပါစေ။